DOWNLOAD NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA MAKA HP DESKJET F4180 - NDỊ ỌKWỌ ỤGBỌALA - 2019
Chọta ndị ọkwọ ụgbọala maka HP DeskJet F4180 MFP
Ọrụ ụlọ ọrụ mgbagwoju anya dị ka ndị nbipute multifunction chọrọ ọbịbịa nke ndị ọkwọ ụgbọala kwesịrị ekwesị na usoro. Nkwupụta a bụ eziokwu karịsịa maka ngwaọrụ ndị na-adịghị ahụ anya dị ka HP DeskJet F4180.
Download ndị ọkwọ ụgbọala maka HP DeskJet F4180
Ihe ngwọta kachasị mma ga-eji disk nke nwere ike iji ngwaọrụ, ma ọ bụrụ na ọ furu efu, a ga-enweta ngwanrọ ndị dị mkpa site na iji Intanet, tinyere ihe omume ndị ọzọ.
Usoro 1: Emeputa Web Portfolio
Enwere ike ibudata software nke ana-akwado na Hewlett-Packard bu ngwaahịa CD.
Gaa na HP Support Resource
Mepee saịtị dị na njikọ n'elu. Chọta menu na nkụzi isiokwu na pịa "Nkwado" - "Mmemme na ọkwọ ụgbọala".
Tupu ịmalite ịchọgharị ngwaọrụ, ị ga-achọ ịhọrọ ụdị nke ọ bụ. MFPs bụ ndị nbipute, wee pịa bọtịnụ kwesịrị ekwesị.
Ugbu a ị nwere ike ịmalite ịchọgharị ngwanrọ maka ngwaọrụ anyị. Tinye n'ime igbe nchọta aha nke MFP chọrọ DeskJet F4180 ma pịa ihe ga - apụta n'okpuru akara.
Lelee nhazi nkọwa nke sistemụ arụmọrụ, yana obere omimi ya. Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, dezie ụkpụrụ ziri ezi.
N'oge a, ị nwere ike ịmalite ibudata ndị ọkwọ ụgbọala. Edebere faịlụ dị iche iche maka nbudata na blok kwesịrị ekwesị. Ahọrọ nhọrọ kachasị mma dị ka "Software na ọkwọ ụgbọala zuru ezu na ọkwọ ụgbọala maka HP DeskJet Series MFP" - budata ya site na ịpị bọtịnụ otu aha ahụ.
Chere ruo mgbe ebudatara ngwugwu - dozie ya tupu ijikọ ya na kọmputa MFP. Mgbe ịchọtara ihe nkwụnye ego, họrọ "Echichi".
Ihe ndị ọzọ arụmọrụ na-ewere ọnọdụ n'enweghị onye ọrụ. Na njedebe nke nwụnye, MFP ga-arụ ọrụ zuru ezu.
Usoro 2: Firmware si na HP
Iji mkpokọta gọọmentị wepụtara oge na mgbalị. Ị nwere ike ime ka ọrụ gị dị mfe site na iji ngwa nkwalite ọrụ Nkwado HP Support.
Soro njikọ dị n'elu ma jiri bọtịnụ akara na nseta ihuenyo iji budata ọrụ ịwụnye.
Wụnye Nkwado Nkwado HP site na isoro ntuziaka nhazi.
Ngwa ga-amalite na akpaghị aka mgbe echichi. Pịa na nhọrọ "Lelee maka mmelite na ozi".
Ihe bara uru ga-amalite usoro iji chọpụta ihe ndị ahụ ma chọọ software ya. N'ezie, nke a ga-achọ njikọ Ịntanetị, nke ọsọ ya na-adabere n'ogologo oge.
Mgbe ahụ na ndepụta nke ngwaọrụ, chọta MFP gị wee pịa "Mmelite" na ngọngọ ihe onwunwe.
Na-esote, họrọ software achọrọ ma wụnye ya.
Usoro ndị ọzọ na-ewere ọnọdụ n'enweghị enyemaka onye ọrụ. Ịkwesighi ịmalitegharia komputa - nani jikọọ mpempe akwụkwọ multifunction ma banye ọrụ.
Usoro nke 3: Nke atọ-ọkpụkpụ ọkwọ ụgbọala na-arụ ọrụ
Na mgbakwunye na ngwá ọrụ ndị dị ka HP Support Assistant nke a kpọtụrụ aha n'elu, enwere ndị ọzọ na-ahụ maka ndị ọkwọ ụgbọala zuru ụwa ọnụ na-arụ ọrụ n'otu ụkpụrụ ahụ. Ngwa ndị a na-enwe ike idozi nsogbu anyị ugbu a. Otu n'ime nhọrọ kachasị mma bụ usoro DriverMax, na ntuziaka zuru ezu maka iji ya mee ihe n'okpuru.
Ihe omumu: Otu esi eji DriverMax
Ọ bụrụ na ngwa a adaghị gị, gụọ nyocha zuru ezu nke ọkwọ ụgbọala ndị ọzọ nke otu n'ime ndị dere anyị kwadebere.
Njirimara niile nke ngwa ndị ejikọrọ Windows dị "Onye njikwa ngwaọrụ". N'akụkụ kwekọrọ na ị nwere ike ịchọta ID - aha ngwaike pụrụ iche maka akụrụngwa ọ bụla. Maka MFP, onye ọkwọ ụgbọala anyị na-achọ, ID a yiri nke a:
DOT4 VID_03F0 & PID_7E04 & MI_02 & PRINT_HPZ
Usoro a ga - enyere anyị aka idozi nsogbu taa. A na-akọwa ụzọ nke itinye aka n'ime ihe dị iche iche dị iche iche, ya mere anyị agaghị ekwughachi ma nye gị njikọ na isiokwu dị mkpa.
Ihe Ọmụmụ: Ịchọta ndị ọkwọ ụgbọala na-eji ID ngwaike
Usoro 5: Atụmatụ System
Ngwọta "Onye njikwa ngwaọrụ", nke a kpọtụrụ aha na ụzọ gara aga, nwekwara ikike ịkwanye ndị ọkwọ ụgbọala na-achọ. Usoro a dị mfe: dịka mepee Dispatcher a, chọta ngwá ọrụ ndị dị mkpa na ndepụta ahụ, kpọọ menu ndị dị na gburugburu wee họrọ ihe ahụ "Ndị ọkwọ ụgbọala di elu".
Otú ọ dị, nke a abụghị nanị ojiji "Onye njikwa ngwaọrụ" maka nzube ndị ahụ. Ụzọ ọzọ, yana nkọwa zuru ezu nke isi, a na-achọta na ntuziaka na-esonụ.
Ihe Ọmụmụ: Nwepụta Ngwaọrụ Ngwá Ọrụ
Nkọwa nke ụzọ maka nbudata ndị ọkwọ ụgbọala maka HP DeskJet F4180 gafere. Anyị nwere olileanya na ị gakwuuru otu n'ime ụzọ ndị e nyere.